Dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan BQ Aquaris X | Androidsis
Shaki la'aan hadda waxaad horey u maqashay terminal-ka ku yaal bushimaha qof walba qaabkiisa, astaamaha farsamo iyo qiimaha wanaagsan. Terminalku ma aha wax kale oo aan ahayn BQ Aquaris X, terminal in maanta Androidsis waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa, Falanqeyn damiir leh taas oo kadib markii aan awooday inaan tijaabiyo BQ Aquaris X inta lagu gudajiray mudo ka badan ama ka yar toban maalmood oo ah adeegsiga degdegga ah sida shakhsiyadeyda Android, waxaa la gaaray waqtigii aan ku siin lahaa fikradayda ugu daacadsan iyada oo loo marayo qodobkan qoraalka ah oo lagu daray dhammaystiran dib u eegis qoto dheer oo fiidiyoow ah oo ku saabsan BQ Aquaris X in aan ku lifaaqo qoraalkan.
Dib-u-eegis fiidiyow oo deggan oo aan deg deg ahayn oo aan ku falanqeyneyno oo aan ku tusinno waxyaabaha ugu xiisaha badan ee BQ Aquaris X, markaa haddii aad ka fekereyso inaad iibsato mid ka mid ah boosteejooyinka BQ oo aad rabto inaad hubiso inay noqon doonto sidaad u jeceshahay, markaa Waxaan kugula talinayaa inaadan seegin faahfaahinta dib-u-eegista fiidiyowga oo dhameystiran oo aan ku baarno iyo waxaan gareynaa moolka nafta BQ Aquaris X.
1 Faahfaahinta farsamada ee BQ Aquaris X
2 Ugufiican BQ Aquaris X
2.1 Naqshad aad u casri ah oo leh dhameystir Premium
2.2 Android Nougat 7.1.1 oo aan lahayn lakab habeyn
2.3 Shaashadda IPS oo leh tiknoolajiyad Quantum +
2.4 Kaamirooyinka ugu fiican ee ku kala duwan qiimaha
2.5 Batariga gaarka ah oo leh ismaamul ka badan 6 saacadood oo shaashad firfircoon leh
3 Ugu xumaa BQ Aquaris X
5 Tusaalooyinka sawirrada lagu qaaday BQ Aquaris X
6 Fikradaha Tifatiraha
Faahfaahinta farsamada ee BQ Aquaris X
Tusaale Aquarius X
Nidaamka hawlgalka Android Nougat 7.1.1
Screen 5.2 "IPS LCD LTPS FullHD oo leh Quantum Color + teknoolojiyad - Teknolojiyada 2.5D - 423 dpi iyo muraayadda Dinorex
Gacaliye Qualcomm Snapdrogon 626 Octa Core oo ah 2.2 Ghz
GPU Adreno 506 ilaa 650 Mhz
Kaydinta gudaha 32GB oo lagu daray MicroSd waxay taageertaa ilaa 256GB awoodda ugu badan
Kaamirada gadaal Sony IMX298 oo leh 16 MP dareeraha ƒ / 2.0 1.12 µm / pixel aperture - 6 lenses Largan - Dual Tone Flash - Wajiga ogaanshaha autofocus (PDAF) - 4K @ 30fps xalinta fiidiyowga - Xasilinta Video (Vidhance) - Dhaqdhaqaaqa Gaaban (720p @ 120fps) - Dhaqdhaqaaqa Degdega ah iyo Waqtiga Joogtada ah - Auto HDR - Toogasho qaab RAW ah - Xakamaynta halbeegga gacanta - Hababka habeenkii ee muuqaalka iyo qarxa
Kaamirada hore Samsung S5K4H8YX 8 MP oo leh ƒ / 2.0 1.12 /m / pixel aperture iyo 3 lenses - Flash hore - 1080p @ 60fps xallinta fiidiyowga - Quruxda Wejiga - Is muuji Selfie
Xuduudaha kala duwan Labada Dano Nano SIM ama Nano Sim + MicroSD - 4G (LTE) FDD (800/1800/2100/2600) (B20 / B3 / B1 / B7) - 3G HSPA + (850/900/1900/2100) (B5 / B8 / B2 / B1) - 2G GSM (850/900/1800/1900) - GPS + GLONASS + GALILEO - Wi-Fi® 802.11b / g / n / ac (laba band - 2.4 GHz / 5 GHz) - Bluetooth 4.2 - NFC
Tilmaamo kale Naqshad qurxoon oo leh dhammeystir bir ah - Dareeraha sawirka faraha ee gadaashiisa dambe - Smart PA ku hadla - aptX ™ teknolojiyadda loogu talagalay Bluetooth - 2 Microphones (Baahiyaha Buuq) - Raadiyaha FM - USB Nooca C-USB
Batariga 3100 mAh aan laga saari karin
Cabbirada X x 146.5 72.7 7.9 mm
Peso Gram 153
Qiimaha 279.90 boggeeda rasmiga ah
Ugufiican BQ Aquaris X
Kuwii aniga i soo raacay waxay horeyba u ogaan doonaan inaan marwalba ka bilaabo waxyaalaha wanaagsan ee ay telefishinada Android na siiyaan ee aan halkan ku falanqeynayo gaar ahaan adiga iyo inaan ku siiyo fikradayda shakhsiga ah ee daacadda ah, in kasta oo ay xaaladdan tahay iyo mid ka reeban tan iyo wax sidan oo kale weligay igama dhicin aniga ka hor, maanta waxay noqon kartaa tan keliya qaybta ama qaybta ka mid ah dib u eegis iyo falanqeyn ku saabsan BQ Aquaris X.
Waana inaynu hortayada ku leenahay heer sidan oo kale u wanaagsan oo qiimo ahaan qiime ahaan wanaagsan leh, inaan ku dhiirado inaan dhaho wax soosaarayaal yar ayaa awoodi doona inay ka adkaadaan xiriirkan u dhexeeya qeexitaanada farsamo iyo qiimaha ilaa aynaan isticmaalno boosteejooyin laga soo dhoofiyo dalka darbiga weyn.
Naqshad aad u casri ah oo leh dhameystir Premium
Mid ka mid ah waxyaabaha sida aadka ah iiga yaabiyey BQ Aquaris X Waxaan ogaanay oo dareemeynaa isla marka aan ka soo saarno sanduuqa madow ee xarrago leh oo ay ku xardhan tahay X weyn wejiga hore. A unibody terminal leh jir bir ah In runtu aad kuugu habboon tahay, in kasta oo dhabarkiisu ka samaysan yahay nooc ka mid ah polycarbonate caag ah, haddana dahaadhka ay leedahay wuxuu siinayaa taabasho gaar ah oo aad ugu eg birta, aad ayeyna u adag tahay xitaa in la qiyaaso inay caag tahay.
Android Nougat 7.1.1 oo aan lahayn lakab habeyn
Marka loo eego nooca Android ee uu leeyahay 'BQ Aquaris X', runta ayaa ah inaadan weydiisan karin wax intaa ka badan tan iyo markii Waxay la timid nooca ugu dambeeyay ee Android 7.1.1 Nougat gebi ahaanba nadiif ah iyo iyada oo aan lahayn wax lagu daro noocyo kale oo aan ka ahayn barnaamij taageero ah iyo barnaamijka kamaradda qaaska ah laftiisa.
Shaashadda IPS oo leh tiknoolajiyad Quantum +
Shaashad leh Quantun Color + tiknoolajiyad ka dhigaysa mid ka mid ah shaashadda IPS-ka ee ugu wanaagsan IPS ee aan awood u yeeshay inaan ku tijaabiyo terminal ku kala duwan qiimahaas.
Waxay leedahay a dhalaalka la qabsiga ee si bilaa cillad ah u shaqeeya, oo leh shaqeyn si loo kordhiyo dhalaalka xaaladaha lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale shaqada shaashadda habeenkii si looga hortago indhaheenna iftiinka buluuga ah ee waxyeellada leh marka aan isticmaalno habeenkii.
Haddii tani aysan ku filnayn, waxay kaloo leedahay a Daaweynta ka-hortagga faraha oo ah tan ugu fiican ee aan soo arkay shaashadda terminal-ka Android ee ka yar 300 oo Euro.
Kaamirooyinka ugu fiican ee ku kala duwan qiimaha
Kaamirooyinka BQ Aquaris X shaki la'aan waa mid ka mid ah awooda aaladahaan casriga ah ee Android, kaamirooyinka qaar foo ay soosaartay Sony qeybta dambe ee xarunta waxaana soo saaray Samsung hortiisa.
Kaamirada gadaal ayaa awood u leh ku duub fiidiyowga tayada leh ee 4K 60 ama 30 fps Marka lagu daro haysashada shaqooyinka Slow Motion si loogu duubo fiidiyow leh cod si tartiib tartiib ah u socda, halka kaameradda hore ay na siineyso suurtagalnimada inaan awoodno inaan duubno fiidiyowga tayada FullHD.
Qodobka weyn ee ka dhanka ah kaamirooyinkan, hore iyo gadaalba, shaki la’aan waxaa laga helay rabitaan ku qaado sawirro iyo fiidiyowyo xaaladaha iftiinka yar Tan iyo wakhtigaas iyo xitaa haddii aan isticmaalno flash-ka ku-dhisan, kuwan horeba waxay uga tageen waxyaabo badan oo la jeclaa tan iyo markii ay la soo baxeen buuq badan.
Batariga gaarka ah oo leh ismaamul ka badan 6 saacadood oo shaashad firfircoon leh
Ugu dambeyntiina iyo runtii dhibic xooggan oo ka mid ah BQ Aquaris X, waxaan soo bandhigi karnaa maareynta tamarta ee nooca ugu dambeeya ee Android 7.1.1 ay ku xiran tahay qalabka isku dhafan ee xaruntan, iyo in kasta oo aan wajaheyno batari ah 3100 mAh , kani wuxuu i siinayay a ismaamul 6 XNUMX saacadood iyo badh ah oo shaashad ah leh isku xirnaanta oo dhan karti u leh marwalba iyo heerka dhalaalka ugu badnaan qaabka la qabsiga.
Intaa waxaa dheer, lacagteeda dhakhsaha badan ayaa noo oggolaaneysa lacag ka qaad terminal-ka haddii loo baahdo saacad iyo rubuc keliya isagoo qiyaastii ah 15% batari.
IPS Quantun Color + bandhig
3 Gb oo RAM ah
Akhristaha faraha faraha badan
Nolosha batteriga dareenka leh
Ugu xumaa BQ Aquaris X
In kasta oo mar kasta oo aan bilowno raadinta wax xun oo ku jira barta 'Android' sida caadiga ah aan ku dhammeyno helitaankeeda, iyada oo tan 'BQ Aquaris X' ay tahay waxa kaliya ee xun ee ra'yigayga hooseeya aan awooday inaan ka helo, waxaan ka helay bilowga iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aan u furo terminalka markii ugu horeysay. Waana inkasta oo ay umuuqato wax aan macno lahayn, oo leh badhamada leh astaamaha u gaarka ah iyo astaamaha BQ, in kasta oo ay sifiican ugu habboon yihiin boosteejada, Aniga ahaan, midka leh badhannada si isku xigxig ah, runtu waxay tahay inay igu qaadatay cabsi dhab ah inaan ula qabsado iyaga.
Aniga shaqsi ahaan waxaa loo bartay inaan haysto booska badhanka dambe ee midigta guriga iyo howlaha ugu dambeeya ee bidixda, taas oo ku jirta BQ Aquaris X taas oo ku soo noqnoqota iyo iyada oo aan suurtagal ahayn inaan awoodo inaan wax ka beddelo ama ka habeeyo goobaha Android .
Badhannada aan iftiimin
Meeleyn badhan ayaa rogay
Badhamada dib looma beddeli karo
Tusaalooyinka sawirrada lagu qaaday BQ Aquaris X
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan BQ Aquaris X
Falanqeyn aad ufiican, haa mudane, cad oo kooban. Fikradayda, ka cabashada in badhanka dhabarka midig uu yahay waxaa sababi kara oo kaliya in loo adeegsado aalado kale, caqligu ma horseedayo hadii aan rabno inaan dib u noqono, si aan u eegno bidix, Sidaa darteed, badhanka dambe ee bidix ee guriga wuxuu ila muuqdaa mid aniga aad iigu saxan Dhinaca kalena haddii aad ka heshay X, isku day Xpro, waa wax la yaab leh !! Salaan iyo mahadsanid shaqadaada
Jawaab Cesar Gonzalez Gayol
Soo bandhigid aad u wanaagsan Francisco Ruiz oo ka tirsan BQ Aquaris X, waxaan ahaa mid ku fiican kooxdaas waxaanan u maleynayaa inaan mid iibsan doono.
Jawaab Oscar Martinez
Fadlan ma ii sheegi kartaa haddii kamaradda pro ay ka fiican tahay LG g4's. Aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab Salome
Vincent forvic dijo
Sidee uga fiicnaan kartaa tan LG g4 haddii ay lamid tahay tan bq x5 oo lagu daray taas oo awalba aad uga liidatay tii g4.
Midkoodna xasiliyaha muraayadaha ah ama diirada saarida laser-ka, iyo waliba dhererkiisa foosha xun iyo pixels yar.
Kaamirada LG g4 aad ayey ugafiican tahay.
Ku jawaab Vicente forvic
Sidaan ku aqaano mid lamid ah BQ Aquaris M5.5 in tan iyo markii aan iibsaday ay dhibaato ka haysato kamarada aan diiradda saarin iyo mugga iyo badhanka awooda waxay shaqeeyaan markay doonaan.
Baradho kale iska jir.
Jawaab Jose carlos benito
Dib u eegis aad u fiican Francisco, waa wax laga xumaado in aaladahaan aan wali si rasmi ah loogu suuq geyn dalka Colombia, waxaan rajeyneynaa falanqeyn dheeri ah oo noocan ah, salaan bro
Dib u eegis aad u fiican Francisco, waa wax laga xumaado in sumadan si rasmi ah aan loogu suuq geyn dalka Kolombiya, sida muuqata waxay leedahay tixraacyo aad u wanaagsan, waxaan dhegta u taaganahay falanqaynta intaa ka badan ee noocan ah, Salaan walaal.
Waxaan halkan ku qorayaa sababta oo ah waxay igu adkeyneysaa inaan jawaabta kadib helo kooxda Telegram darteed.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka ogaado Qalabka BQ, waxaan u arkaa inuu aad u wanaagsan yahay, aan dhahno khadka Samsung, ma la barbar dhigi karaa midkood tusaale ahaan? Si aan fikrad fiican u yeesho, dhanka kale waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa inta jeer ee ay tahay, waxa ay tahay inaan arko si aan u ogaado haddii ay suurtagal tahay in laga isticmaalo dalkeyga.
Ku jawaab Antonio Salatino
Codsiyada ugufiican ee lagu baaro dukumiintiyada ku saabsan Android